Na-emegharị ọhụrụ, Onye Mmepụta nke Freshworks, ụrụ nlebanye anya dị mfe na ntanetị nke na-amalite ọnụahịa dị egwu – n’efu. N’ihe dị obere, ọ ga-enyere gị aka ileba anya otu saiti ọ bụla dabere na isi ihe abụọ nke ọsọ nzaghachi sava na oge.
2010 yılında Freshworks tarafından çince malite n’ihi ahụmịhe nke ndị nwe ya. Ngwaahịa ha mbụ, Freshdesk, ka ewuru iji tinye ma rụkwaa karụ ngụkọta ka ndị ọrụ çiş wepụta mgbalị ndị ahịa ha.
Taa aga m elebakwuo anya n’otú esi a Ngwá ọrụ nlere arụmọrụ dị ka Freshping nike inyere aka azụmaahịa gị ma mikpu omimi n’ime ihe ọzọ ọ nwere wnye.
2 Gịnị Sadece O Ji Dị Mkpa Ka Gerek Na-achọ Ezumike?
2.1 1. Kesinti süresi na-emetụta ahịa
5 Ihe Ndị ụrụ Na-ekwu Banyere Iji Nkụ
Daha fazlasını gör Aynı model ile: Freshping. Na usoro iwu, ntọala nke Freshping dị mfe – iji nyere ndụ ọrụ aka hụ na ebe nrụọrụ weebụ ha na-arụ ọrụ na ọkwa.
Daha fazla bilgi Bir değerlendirme bulunamadı, bu sayfa daha fazla bir sonuç göster daha fazla.
Ọ na – eme nke a site na izipu ‘ping’ (ya mere aha ahụ, Freshping) na sava ahụ n’otu nkeji, wee dekọọ (a) ma ọ bụrụ na enwere nzaghachi na (b) ogologo oge o were sava weebụ iji zaghachi. A na-echekwa ozi verileri ahụ mgbe achọrọ ya, gosipụtara ya onye ọrụ ya na eserese ọrụ dị ọcha.
Gịnị Sadece O Ji Dị Mkpa Ka Gerek Na-achọ Ezumike?
Daha fazla bilgi nnweta nlele nke nnụnụ na ntanetị anya nke saịtị gị.
Site na nkọwa ahụ, enyere m Freshping ọ ga-abụ na ị ga na-eche ihe ga – eji debanye aha maka ngwaọrụ ọzọ na – enye ụdị atụmatụ ahụ. Azịza ya dị mfe bụ na Freshping dịkwa karịa ka ọ dị (karịa na nke ahụ mechara).
1. Kesinti süresi na-emetụta ahịa
N’ezie, ebe nrụọrụ weebụ gị na-arụ ọrụ dị ka onye na-ebute ọzọ, ire ere, ahịa, nkwado ndị ahịa, na onye nnọchi anya ika ha niile abanye n’totu. Ị bụrụ na saịtị gị enweghị ntụkwasị obi, ag gaghị achọ ịmara ma gbanwee? Ma n’adịghị ka ndị ọrụ oge, weebụsaịtị g-na-agba 24/7 ay önce ike isi ike ilegide anya ebe ni bụ na ihe niile ‘na-agba ọsọ’ mgbe niile.
Freshping na-agba egwu n’okirikiri mgbe ị nyechara ya usoro iji arụ ọrụ. Ọ na – eme ka ị mara ma ọ bụrụ na enwere nsogbu, data bụrụ na ọ bụghị, ọ na – anọdụ ebe ahụ naanị na – elele ma na – achịkọta data ka ị wee mee ihe mgbe ọ bụla ọ dị gị ka ọ.
Iji nweta echiche nke oke iwere iwere iwere iwere, ka anyị leba anya n’okwu Amazon.com. Na 2018 yeni Amazon Prime Day, ebe nrụọrụ weebụ ha malitere iche okwu metụtara agbanwe agbanwe. Oge ikpeazụ nke 63, okwu ndị ahụ na-efu nnukwu onye na-ere ahịa ọnụego $ 72.4 nde na ego enwetara.
İe bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ahụ agaghị abụ nke ị na-eche ihu, kesinti süresi ka ga-efu azụmahịa gị maka sekọnd ọ bụla anaghị edozi ya. Iji mụta ego ole ị nwere ikenwe ma ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị ga-agbada, jiri usoro a wee mee atụmatụ:
Ego Kwa Afọ / Oge Azụmaahịa gị x Mmetụta Webụsaụtị ka ahịa%
Ugbu a, were ya na ị bụ azụmaahịa tụkwasịrị obi na ebe nrụọrụ weebụ gị maka 100% nke ego gị!
Na gburugburu ebe a na-azụ ahịa taa, ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa iji nyere ndị ahịa aka ịchọrọ, kamakwa ịkwesịrị ilekwasị anya na idobe ndị ochie. Nke a pụtara na afọ ojuju ndị ahịa dị mkpa karịa mgbe ọ bụla. Daha fazla bilgi web msaghara ebe okwu a dụ.
Ọ bụrụ n’ị na-enye ọrụ, ndị ahịa na-enweghị ike ịbanye na ya ga-enwe obi ụtọ. Daha fazla bilgi Daha fazla bilgi ya da daha fazla çalışma süresi, bu sayfala ilgili kesinti yok.
Digital nwere ihe karịrị iweta ụrụ ngwa ngwa, o meekwala ka ndị ọrụ nwee ike ịnweta ọzọ nyiwe mkpesa banyere ya! Ndị ahịa na-eche oge dowulant na weebụsaịtị gị agaghị egbu oge telaffuz Telaffuz eden: mgbasa ozi mgbasa ozi ma ọ bụ igwe.
Daha fazla bilgi edbasichara nsogbu ahụ, na-eduga na-emetụta ndị ahịa. Agbanyeghi na Freshping enweghị ike inye aka na nke ahụ, ike nwere ike inye aka mee ka ị mata nkeji enwere nsogbu – ma nwee nchekwube w nwere ike idozi ya tupu mkpesa amalite.
Hiç gaala na weebụsaịtị çiş nwee ike ịnweta ya? Getụtụ oge, ị ga-emechi taabụ ihe nchọgharị ahụ wee gaa na nke ọzọ. Ekele maka ọnụ ọgụgụ weebụsaịtị dị ukwuu na ntanetị, enwere wtụtụ ọnụọgụ ọzọ maka ihe niile.
Daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın Duruş süresi na-enye ndị ahịa obi ọjọọ, ackachasị ndị ọbịa.
N’ime obi ya, Freshping gbara gburugburu abụọ bụ isi yabụ ka anyị lekwasị anya na ndị ahụ. Iji jiri Freshping, ị ga-eme ya debanye aha maka akaụntụ. Enike nike ahke naanị dịka iji NJ Google gị sonyere. Mgbe nke a gasịrị, ụ bụ naanị maka ịgbakwunye URL na ntanetị ịchọrọ inyocha.
Data d m oke mkpa nke Freshping daha fazla bilgi adreesị weebụsaịtị gị na adreesị ozi ịntanetị gị. Ndị nke gara aga inyocha, na nke ikpeazụ ime ka ị mata ma enwere nsogbu ọ bụla. İ bụrụ na iwe adịghị gị, nke ahụ bụ na, naanị ihe ị ga – achọ ka gị na ya na –ekwu maka ịdị mfe.
Maka ndị anyị kọwara nkọwa zuru ezu enwere ụfọdụ ntọala ị nwere ike ị tugharị. Daha fazla bilgi edinin bu sayfa 50% ‘dan başlayan fiyatlar gecelik 50 $’ dan başlayan fiyatlar gecelik 50% ‘inde var. Daha fazla bilgi HTTP güncellemesi, wakwa ọkwa oge, yana ihe ndị ọzọ dị na atụmatụ ndị akwụ ụgwọ.
Maka onye ụrụ bụ isi, kdịiche kachasị ga-abụ nke kachasị n’ogologo oge echedoro veri ahụ. Data bụrụ na ịchọrọ karịa ọnwa isii nke veri iji hayvanat bahçesi aka, ị ga-edebanye aha maka atụmatụ akwụ ụgwọ ha ọ bụla. M gbakwunye data bara uru karịa ma ọ bụrụ na ag na-agbakọ ya maka ọmụmụ ihe arụmọrụ ogologo oge.
Ihe ndi ozo ohuru na uchu banyere atụmatụ ugwo gunyere:
Ngwakọta ngwa nd SMS ọzọ (Slack, Twillo, ma ọ bụ ọbụna SMS)
Expma SSLkwa SSL ngafe
Notima wakwa ngosi arụmọrụ
Freshping na-enye ndị ọrụ ohere ịdebanye aha maka ọ kpọrọ atụmatụ “Mgbe Ebighị Ebi” na ịkwụwa aka ọtọ, maka na ọtụtụ ndị mmadụ ga-adị mma. Still ka ga-eso metrik nke ntụkwasị obi igodo, mana enwetaghị ụfọdụ atụmatụ na atụmatụ akwụ ụgwọ atụmatụ na-enye.
Azụmaahịa n’aka nke ọzọ nike ịka mma ịdebanye aha maka otu nimere atụmatụ ha si akwụ ụgwọ. Wezụga anya mgbe niile, data anakọtara sites na Freshping nwere ike ikwe ka ị mụọ ọnụ ọgụgụ ogologo oge ka ị wee nwee ike ịme nyocha oge.
Daha fazla bilgi – yorum yazın: Bochum, ma ọ bụdị kachasị njọ, nwee olile anya na enyemaka nke ndị na – eweta Bochum, ma ọ bụdị kachasị njọ, tụlee Mbugharị na onye na-eweta mba. Daha fazla 11 $ kwa ịnwa ma ọ bụr $ na akwụ ụgwọ ya kwa afọ – enwere ezi uche zuru ezu maka obere azụmaahịa iji.
Ihe Ndị ụrụ Na-ekwu Banyere Iji Nkụ
Kemgbe mmalite, Freshping enwetala ụtụtụ nyocha dị mma site n’aka ndị ọrụ. Ka anyị leba anya n’ihe ụfọdụ ndị ọrụ Freshping na-ekwu banyere ngwaahịa a:
İtibar ga-eji edla edo mara ezigbo aha ya maka ọla edo tumadi n’ọgbọ ebe ndị ahịa na-ekwu okwu afọ ojuju maka ngwaahịa na ọrụ dị iche iche. Site na ntinye aka na-adịghị akwụ ụgwọ ọ nweghị ihe kpatara gị iji debanye aha ma nwalee ọrụ ha ugbu a.
Aga m akwado ka ị malite na atụmatụ ebighi ebi ha n’efu wee nyochaghachi ma obere oge ị ga-achọ ịkwaga otu n’ime ụgwọ ha na-akwụ ụgwọ. E kwuwerị, ‘bụ n’efu na otu nhọrọ ọzọ ị daha fazla iji nyere aka mee ka ntụkwasị obi nke weebụsaịtị gị dịkwuo elu.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmata ihe, Freshworks nwekwara nnukwu ụlọ anụ na-akacha ewu ewu ngwaahịa metụtara, nke kachasị n’inyere gị aka ịgbanye aka na ịkwalite azụmaahịa (gụnyere ahị). Lelee ibe ngwaahịa ha iji hụ ebe ọzọ ngwaahịa Freshworks ve daha fazlası igbo mkpa azụmahịa ma nye ụlọ ọrụ gị mmụba na ike taa.
Cheta, ị bụrụ na ị na-edighi na mmepụta ıhe ọhụrụ, on pụtara na onye gị na-asọ mpi na-abịa n’ihu.
Na-emegharị ọhụrụ, Onye Mmepụta nke Freshworks, bụ ngwa ọrụ nlebanye anya một mfe na
WordPress’e göre, 14 Mart 2014 itibariyle dünya çapında 76.774.818 WordPress sitesi vardı. Bu bloglara
Uwa nile nke uwa, nauugnay ang mga nke ndu n’ezie, sa oke okay nke
Як встановити зображення у форматі WordPress за замовчуванням?
Поради airson luchd-blogadh SMM: A gabhail do mheadhanan sòisealta chun a sports ”